Moonlight Drawn by Clouds ( 2016 ) - မြန်​မာစာတန်းထိုး
By Myanmar Asian TV Channel August 23, 2016
မိန်းကလေးဆိုတာကို ဖုံးကွယ်ပြီး ယောကျာ်းလေးလိုဟန်ဆောင်ကာ
အောင်သွယ်တော် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဆမ်နွန် (Kim Yoo-jung.)
ဆမ်နွန်က ဖောက်သည် တစ်ယောက်အတွက်ရေးပေးတဲ့ ရည်းစားစာဟာ
အိမ်ရှေ့မင်းသားရဲ့ ညီမဖြစ်သူအတွက် ဖြစ်နေတဲ့အခါ....
ညီမဖြစ်သူဆီကို ရည်းစားစာ ရေးတာဘယ်သူလဲဆိုတာကို စုံစမ်းနေတဲ့
အိမ်ရှေ့မင်းသား ဟိုမြောင် ( Park Bo-gum )
သူတို့နှစ်ဦး တွေ့ကြတဲ့အခါ.. ဘယ်လို အဖြစ်အပျက်ကလေးတွေ ဖြစ်လာသလဲဆိုတာရယ်..
ဆမ်နွန်က မိန်းမစိုးအဖြစ် နန်းတွင်းကို ရောင်းစားခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့...
Moonlight Drawn by Clouds ကို ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
Encoder : Thae Thae
Episode 1 (pcloud Link )
Episode2(pcloud Link )
Episode3(Mediafire Link )
Episode4(pcloud Link )
Espoide 8 (Pcloud link)
soewin oo August 23, 2016 at 10:42 PM
Kaung Kaunh2 August 29, 2016 at 2:17 AM
Kaung Kaunh2 August 29, 2016 at 2:18 AM
gu gu 21 August 30, 2016 at 7:04 PM
khinsandahtun maythu August 30, 2016 at 7:35 PM
တင်ထားတယ်ဆိုပြီး ပိုစ့်တွေ့မိလို့... ဒီရောက်တော့ မတွေ့ :O
Rai Rai Lay August 31, 2016 at 3:36 AM
gu gu 21 August 31, 2016 at 9:35 PM
Thz fir 4
tdlin29 lin September 1, 2016 at 6:40 AM
ဘယ်နှစ် ရက် တခါ တင် တာ လဲ ဟင့်
Mr Nameless September 5, 2016 at 7:41 AM
a pie thit lay tin pay pr onn56
gu gu 21 September 6, 2016 at 4:41 AM
Epi 5,6 တင်ရင် pcloud လေးနဲ့ပါတခါတည်းတင်ပေးပါနော် mediafire နဲ့ပဲမတင်ခဲ့ပါနဲ့ဗျို့
gu gu 21 September 6, 2016 at 2:24 PM
myo htet September 10, 2016 at 11:14 AM
Epi6ko mediafire nae tin pay par oon
Ecity Junction NPT September 10, 2016 at 9:02 PM
Wint wint September 11, 2016 at 9:10 AM
Epi7လေး please please. 😁
Wint wint September 11, 2016 at 9:11 AM
Tar Gyi September 13, 2016 at 6:42 AM
ဒုန်းးးး ဒုန်းးးး ဒုန်းးး :-P
Bel Lay September 14, 2016 at 2:42 AM
Please Check Episode 6, it is not working
Kyaw Lin September 14, 2016 at 8:02 PM
epi6ကို ဒေါင်းလို့မရဘူးဗျ
Thinzar Ei September 14, 2016 at 10:41 PM
Epi6link လေးပြန်ကြည့်ပေးပါဦး
Stephen The Great September 15, 2016 at 10:11 AM
Stephen The Great September 15, 2016 at 10:12 AM
ဖန်.တို.ရေ...ဒီ Blog လေးက Link တွေ ကို adf.ly မခံပဲ ရိုးရိုး ချ ပေးထားတာ တွေ.တော. တော်တော်အံသြမိတယ်... ဘယ်နေရာကများအကျိုးမြတ် ရ မလဲလို.လည်းစဉ်းစားမိတယ်...
Kimjun Hee September 15, 2016 at 7:02 PM
Lwanmin Khant September 17, 2016 at 6:47 AM
episode- 8 ကို Mediafire link လေးတငျပေးပါ
candy. candy September 19, 2016 at 6:30 AM
candy. candy September 19, 2016 at 6:32 AM
Hay Mar September 30, 2016 at 12:59 AM
ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ် ဒီ Site လေးကို <3
Myo Htet October 2, 2016 at 3:19 AM
epi9p cloud linkလေးတင်ပေးပါအုံး
Thandar Win October 12, 2016 at 11:31 PM
epi အသစ် တင်ပေးပါအုန်း